kune vakawirwa nenjodzi
inoda rutsigiro rwako Nharaunda Dzinoporesa Kuvhenekera Chiedza paDambudziko Unogona Kubatsira Kushambadza nyaya dzine chekuita nekushungurudzwa kwevechidiki
inobatsira vana kutsvaga rubatsiro uye kuvapinza munzira yekupora.
BullyingCanada anotenda kubvunza kubva kuvatori venhau pamusoro pebasa.
kupa vechidiki vanodheererwa ramangwana rakajeka
BullyingCanada kwaanopfuura makore gumi namashanu yakatsigira pwere munyika yose—kubetsera vanyajambwa vokudheererwa kuwana nzira yokupora inovabetsera.
BullyingCanada inopa runyoro rwesevhisi, uye inopa masevhisi iwayo zvichienderana nezvinodiwa nemunhu. Munhu wese anobatwa semunhu kwete faira remhosva chete. Iyo ethos inopinda mune zvese izvo BullyingCanada zvinoita kuti: kupa vechidiki vanodheererwa ramangwana rakajeka. Icho chinopfuura mutsara weti, ndicho chikonzero BullyingCanada iripo.
ose nguva Counts
Kana mwana achinetswa kwenguva refu, mukana mukuru wokuva namavanga omuviri, ndangariro, uye ndangariro anogona kugara kwoupenyu hwose. Kudheerera kunogona kuva kunoparadza, kuchisiya vana vasingadi, vachinyara, uye vasina kuchengeteka.
Vana vanowanzotambura nemarwadzo emudumbu, kutemwa nemusoro, kutya, uye hope dzinotyisa. Vanogona kutadza kurara—kana kuti vanganyanya kurara. Vanowanzoita zvisizvo muchikoro nekuda kwekurasika kwekutarisa uye kusatya kana kuenda kusingaite sezvavanoedza kutiza vanodheerera. Kana kusingaregi, kudheerera kunogona kuita kuti vana vazviuraye. Kudheerera kunokuvadzawo vanhu vanenge vachiona, vangatya kuti naivowo vachashungurudzwa.
Vanodheerera vanodzidza kuti vanogona kunzvenga utsinye uye chisimba dzimwe nguva vanoita izvi kusvika vakura, vachiva nemukana wakakura wokuti vangazova mbavha kana vakatopinda muutsotsi.
Ichi chikamu chechikonzero BullyingCanada inodiwa zvikuru kubatsira vana vanodheererwa, nokukurumidza sezvinobvira pashure pokunge kudheerera kwatanga
Cyberbullying pakati pevadzidzi iri kuwedzera muKenora maererano neOntario Provincial Police. Tsananguro iyoyo BullyingCanada inopa kune cyberbullying iri kushandisa iyo
Zvinorevei Kupemberera Pink Shirt Day
Vazhinji vekuCanada vanofunga nezveHalifax, Nova Scotia, senzvimbo yakanaka yekugara, uye yekushanyira, asi dunhu remugungwa ndiko zvakare kunozivikanwa Zuva rePink Shirt.
Chokwadi: Inopfuura hafu yevadzidzi vakabatwa nekudheererwa vakatenda kuti vanodheerera vaigona kukanganisa izvo vamwe vadzidzi vaifunga nezvavo. Vadzidzi
Rwendo rwakazara rwedenderedzwa: Kuunza Cloudflare Canada - Intelligent CIO North America
Michelle Zatlyn, Co-muvambi, Mutungamiriri uye COO paCloudflare, anotsanangura kuti kambani iri kuwedzera sei mabasa ayo eCanada, mashandiro anoita kambani nemabhizinesi eCanada uye.
Un rwendo rwakapera : chinyorwa che Cloudflare Canada
Aujourd'hui, Cloudflare annoncé que Toronto accueillera le premier bureau et la première equipe de Cloudflare kana Canada.
RWENDO RWAKAZARA RWEDENGA: Kusuma Cloudflare Canada
Nhasi Cloudflare yakazivisa kuti Toronto ichave kumusha kune Cloudflare yekutanga hofisi yeCanada uye timu. Ndichiri kugara muSan Francisco, ndakaberekwa
Mibvunzo? Unoda imwe mhando yefaira kana musiyano? Bata Hofisi Yekufambiswa Kwemashoko kuburikidza neemail: [email inodzivirirwa]
Nyorera Mvumo yekushandisa BullyingCanada Logo kana Zviratidzo
Dhaunirodha Zip File (.pdf, .png, .svg)
Dhaunirodha Zip File (Greyscale; Dema; Ichena) (.pdf, .png, .svg)
Dhaunirodha French Zip File (.pdf, .png, .svg)
Dhaunirodha French Zip File (Greyscale; Dema; White) (.pdf, .png, .svg)
BullyingCanada Logo isina Tagline
BullyingCanada Chinyorwa Mark
Dhaunirodha Font File
Canada Post Yakabvumidzwa
Yakananga Mail Alternate